Ciidanka Puntland oo waxyaabaha qarxa kusoo bandhigay Boosaaso (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka Puntland oo waxyaabaha qarxa kusoo bandhigay Boosaaso (SAWIRO)
Howlgal ay ciidanka amniga gobolka Bari iyo kuwa nabadsugida maamulka Puntland ka sameeyeen magaalada Boosaaso ayaa waxay kusoo qabteen miino nooca dhulka aaso ah iyo gaari ay ka carareen raggii aasi lahaa miinadaas.
Taliyaha qeybta booliska gobalka Bari G/sare Xussen Cali Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay inay gacanta ku hayaan gaarigii ay wateen raggii aasi lahaa miinada islamarkaana ay dhawaan soo bandhigi doonaan.
Dhinaca kale, G/sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa sheegay inay haatan wadaan baaritaano ku aadan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen raggii watay gaariga oo uu sheegay inay goobta isaga baxsadeen.
Dhowr jeer oo hore ayaa waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay weeraro iyo dilal qorsheysan oo loo geystay mas’uuliyiin iyo askar ka tirsan maamulka Puntland.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii waqooyiga magaalada Gaalkacyo qarax ismiidaamin ah lagu dilay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur, kaas oo ay mas’uuliyadiisa sheegatay Al-shabaab.